China BD1AE gorodona fanavaozana masinina sy mpanamboatra | Jinqiu
TOSIKARATRA / Frequency 220V / 50Hz
Savaivony takelaka fototra 432mm
Lanja tsy afa-karatsaka 72.2kg
Lanja vy mavesatra 1X12.8kg
Haben'ny fonosana lehibe 535X435X375mm
Ny vato dia fitaovana manokana izay manome fanampin-javatra mihaja amin'ny trano rehetra, tsy vitan'ny matanjaka sy matanjaka fa manana loko sy loko isan-karazany koa. Ka trano fandraisam-bahiny, magazay, seranam-piaramanidina, toeram-ponenana avo lenta sns sns no hampiasa vato voajanahary ho haingon-trano ary hampiasa vato maro samihafa amin'ny faritra iray ihany. Na dia mahery sy mateza aza ny vato dia mbola ho simbain'ny toetr'andro sy ny fifamoivoizana izy io ary hahafoana ny sandany manokana. Raha hosoloina dia tsy handany vola be fotsiny fa hisy akony amin'ny asa sy fiainana mahazatra. Noho izany, tsara kokoa ny manavao.
Ny milina fanavaozana ny gorodona dia namboarina ho an'ny fanavaozana, toy ny milina maro an'isa izay afaka mitoto, manafosafo, manaisotra ny savoka, manavao haingana sy kristaly amin'ny gorodona amin'ny milina iray. Ampy ny lanjany, afaka ampiasaina amin'ny gorodona vato hafa tsy mitovy, haingam-pandeha ambany mba hanatsarana ny fahombiazana amin'ny fikolokoloana sy ny poloney. Famolavolana mahaolona, ​​fitaovana fampakarana herinaratra eo alohany, fitaovana fanitsiana marindrano miorina amin'ny hery mihintsy no mahatonga ny borosy rehetra hitoto tany sy ho mora ampiasaina. Ny fizotran'ny fanavaozana dia mitahiry mihoatra ny 80% amin'ny vidiny noho ny fanavotana azy, afaka mandeha amin'ny alina, fa tsy mahomby amin'ny fotoana ara-dalàna.
Ny milina fanavaozana ny gorodona miaraka amin'ny simika, no nisafidy voalohany hanaovana gorodona.
Previous: Masinina borosy BD3A maro-miasa
Manaraka: Masinina fanavaozana BD2AE-gorodona
70L / 80L lena sy maina madio kokoa amin'ny vacuum amin'ny squeege ...